ဖူးနုသစ်: လူပျိုသိုးကြီးများ သိဖို့ကောင်မလေးတို့အကြောင်း (၂)
လူပျိုသိုးကြီးများ သိဖို့ကောင်မလေးတို့အကြောင်း (၂)
လူပျိုသိုးကြီးများ သိဖို့ ကောင်မလေးတို့ အကြောင်းကို နောက်တစ်ပိုင်း ဆက်ရေး လိုက်ပါဦးမယ်။ လူပျိုသိုးကြီး ဆိုတာ ရည်းစား တစ်ခါမှ မထားဖူးသေးတဲ့ သူများကိုပဲ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ရည်းစား တစ်ဒါဇင်လောက် ထားဖူးပြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတဲ့သူများ မပါပါဘူး။
လူပျိုကြီးတွေက ရည်းစားတစ်ခါမှ မထားဖူးတဲ့ ကိစ္စကို ဂုဏ်ယူစရာ ကိစ္စတစ်ခု အနေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရှေ့မှာ အသားယူ ပြောတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒါက ဂုဏ်ယူစရာ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်မလေးတွေက ဒီအရွယ်ကြီးထိတောင် ရည်းစားမရဖူးဘူး ဆိုရင်တော့ တခုခု လွဲနေလို့ ဖြစ်မယ်လို့ တွေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်တော့ "ဒီအရွယ်ကြီးထိတောင် ရည်းစားမထားဖူးဘူး။ ဟုတ်လား။ တုံးလိုက်တာ။" လို့ အားမနာတတ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က တည့်တည့်ကြီး ဆော်ထည့် လိုက်မှပဲ အဲဒါ ဂုဏ်ယူစရာ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိရှာပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မကြိုက်တဲ့သူကို ဘယ်လောက်ကြီး Perfect ဖြစ်နေပေစေ သူတို့လည်း မကြိုက်ချင်တာ အမှန်ပါပဲ။
ကောင်မလေးတွေဘက်က ဒီလူကြီး ငါမှ ပြန်မကြိုက်ရင် ဘယ်သူမှ ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဝင်မသွားဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ အဲဒီလို ထင်သွားရင်တော့ ရှေ့လျှောက် လှုပ်ရှားရတာ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်မှာ ရည်းစားမရှိဖူးရင်တောင် ကိုယ့်ကို လိုက်ကြိုက်ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အကြောင်း အသားယူပြီး ပြောလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဘေးနားက ကောင်မလေးတွေ ကိုယ့်ကို ကြိုက်နေတဲ့ ပုံစံ ဖမ်းလို့ ရပါတယ်။ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ဪ သူရည်းစားမရတာ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ပါ။ ကြိုက်မယ့်သူ မရှိလို့ မဟုတ်ပါလား ဆိုတာမျိုး ထင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အလွန်အကျွံတော့ မကြွားမိဖို့ သတိထားပါ။ ဖောတာ လွန်သွားရင်လည်း ငကြွားကြီးဆိုပြီး အမြင်ကတ် သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့ ရည်းစားထားဖူးတဲ့သူများ ကိုယ့်ရဲ့ အရင်ရည်းစားတွေ အကြောင်း ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အကြောင်း ကောင်မလေးကို အိတ်သွန်ဖာမှောက် လျှောက်ပြော ရမယ်လို့လည်း မယူဆ စေချင်ပါဘူး။ အဲဒီလို အကြောင်းတွေ ကောင်မလေးကို ခရေစေ့တွင်းကျ ပြောမိရင် သူနဲ့ ရည်းစားဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်မှ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ် တူးခဲ့မိပါလား ဆိုပြီး နောင်တရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ လူပျိုကြီးများ ကောင်မလေးတွေ ကြိုက်အောင် ဣန္ဒြေ သိက္ခာကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ နေရမယ်လို့ ထင်ကြတာပါ။ တစ်ချို့ကတော့ သမာဓိပိုး ပိုးတယ် ခေါင်းစဥ်တပ် ကြပါတယ်။ အဲဒီနည်းက မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ Brad Pitt တို့ ကိုရီးယားမင်းသား Rain တို့လို ရုပ်ရည်မျိုး ရှိနေရင်ပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကို သေလောက်အောင် ကြိုက်နေရင်တော့လည်း တစ်မျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ မစဥ်းစားပါနဲ့။ ရုပ်တည်ကြီး လုပ်လေလေ ရည်းစားရဖို့ ဝေးလေလေပါပဲ။ မျက်နှာပြောင်ရဲရင် ရည်းစားရဖို့ ပိုပြီး နီးစပ်ပါတယ်။ သိက္ခာကျတာတွေ ဘာတွေ ထည့်တွက် မနေပါနဲ့။ သိပ်ပြီးတော့ အလွန်အကျွံ မျက်နှာမပြောင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ သိပ်အလွန်အကျွံ လုပ်ရင်လည်း ကောင်မလေးတွေ ချဥ်သွား တတ်ပါတယ်။
ကောင်မလေးရဲ့ ပါးစပ်က ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကို အလွယ်တကူ ထွက်လာဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ တချို့ ကောင်မလေးများ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂ လလောက် ကြာတဲ့အထိ မပြောကြပါဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကြားရဖို့ အရေးမကြီးပါဘူး။ အဲဒီစကား မကြားရဘဲ နဲ့လည်း ရည်းစားဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ကောင်မလေးတွေက ပြန်ကြိုက်ဖို့ မကြိုက်ဖို့ ကိစ္စကို သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဘယ်တော့မှ မသေချာပါဘူး။ အတော်များများက ရည်းစား ဖြစ်ပြီးရင်တောင်မှ ဒီလူကို ငါကြိုက်တာ မှန်ရဲ့လား ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတတ်တာ မျိုးပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့ဘာသာ သူတို့ သေချာသွားအောင် ကိုယ်က အကူအညီ ပေးရပါတယ်။ နိမိတ်ပြ လမ်းကြောင်းပြ စကားတွေ ကြုံရင် ကြုံသလို ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြောပေးဖို့ လိုပါတယ်။
တစ်ချို့ လူပျိုကြီးများ ရည်းစားမရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ရွေးလွန်းလို့ပါ။ ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကား မပြောခင် ကတည်းက ဒီကောင်မလေးနဲ့ ငါနဲ့ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလား တွေးပြီး စိတ်ကူးထဲမှာ ကလေး ၂ ဒါဇင်လောက်ရတဲ့ အထိ တမျှော်တခေါ် တွေးကြပါတယ်။ ဒီကောင်မလေးနဲ့ ယူလို့ဖြစ်မဖြစ် လေ့လာပြီးမှ ရည်းစားစကား ပြောမယ်ဆိုပြီး တွေးတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ရည်းစား မဖြစ်ခင် သူနဲ့ တသက်လုံး အဆင်ပြေမပြေ ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ရည်းစားမဖြစ်ခင်တုန်းက စိတ်ဓာတ်မာ လိုက်တာလို့ သိထားတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ရည်းစားဖြစ်ပြီးတဲ့ အချိန် အတွင်းစိတ်က အလွန်ပျော့နေတာမျိုး သိရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ လူတိုင်းကို သဘောကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးက ရည်းစားကိုမှ ကွက်ပြီး ပြသနာပေါင်းစုံ ပတ်ရှာနေတာမျိုးလည်း ဖြစ် တတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းနဲ့ ပြသနာ လှည့်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးက ရည်းစား တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကွက်ပြီး ကောင်းနေတာ မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် သူတို့ရဲ့ ရည်းစားကိုပဲ ဖွင့်ပြောပြတတ်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကို မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အဖြစ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ သိခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရည်းစားမဖြစ်မချင်း ကောင်မလေးနဲ့ အဆင်ပြေမပြေဆိုတာကို တွက်လို့ မရဘူးလို့ ပြောတာပါ။
ဒီတော့ပစ်က နည်းနည်း Sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေက အမှန်တရား ပေမယ့်လည်း ရေးလို့ မကောင်းပါဘူး။ ဥပမာ ကောင်မလေးတွေ အလိမ်ခံရတာ ကြိုက်တယ်။ သိသိကြီးနဲ့ အလိမ်ခံချင်တာလို့ ပြောရင် ကောင်မလေး ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်က ငြင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲ တို့မပါဘူး။ တို့က ရိုးသားတာ ပွင့်လင်းတာပဲ ကြိုက်တယ် လို့ ပြန်ပြောကြ ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားတာ ပွင့်လင်းတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာတော့ လူတိုင်း ပြောကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ရင် အဲဒီလို စကားကို တည့်တိုး ပြောတတ်တဲ့သူတွေ အများစု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို တကယ် မကြိုက်ဘူး ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
စကားဆိုတာ ချိုအောင် ပြောရင် မလိမ်ဘဲ ပြောလို့ မရပါဘူး။ အနည်းအကျဥ်းတော့ မုသား ထည့်ပြော ရတာပါပဲ။ ကောင်မလေးကို ကြွေနေတဲ့ အကြောင်း ပြောရင် အနည်းနဲ့ အများတော့ လိမ်ရပါတယ်။ ကြုံရင် ကြုံသလို ထည့်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ညက အိပ်မပျော်ဘူးကွာ ဆိုရင် ကောင်မလေးက သူ့အကြောင်း စဥ်းစားနေလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန် ကြမ်းပိုးကလည်း တစ်ညလုံးကိုက်နေတာပဲလို့ မပြောဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကြမ်းပိုးကိုက်လို့ အိပ်မပျော်တာ မှန်ပေမယ့် မင်းကိုကိုယ် တညလုံး သတိရနေတယ် ဆိုတာမျိုး ချော်လဲရောထိုင်တွေ လုပ်တတ်ဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း လိမ်မှန်း သူတို့ သိပါတယ်။ သိသိကြီးနဲ့ အလိမ်ခံချင်တာပါ။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဟုတ်လောက်ပါတယ်လေ ဆိုတာမျိုးနဲ့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးချင်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တချိန်လုံး ဘတ်ကီးရိုက် နေလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားတွေတော့ ရှောင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကို အရမ်းစွတ်ပြီး အထင်ကြီးနေရင်လည်း သူ့ဘက်က ပြန်ကြိုက်ဖို့ နည်းနည်း တွန့်နေ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က သာမန် သူလိုငါလို လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိအောင် ပြောပြ ပေးရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် ဆိုတာတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တစ်ခါတလေ အပျင်းကြီးတတ်တဲ့ ကိစ္စ အချိုအချောင် လိုက်တတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးကို ဖွင့်ပြောပြလို့ သူတို့ အထင်သေးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလည်း လူထဲကလူ တစ်ယောက်ပါလား ဆိုတာကို သိရင် ပြန်ကြိုက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။
သိထားသမျှတွေကို မခြွင်း မချန်ဘဲ အကုန်ပြောပြ ထားပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ ကိုယ့်အပိုင်းပါပဲ။ ညာဏ်ရှိသလို အသုံးချကြပါ။ သီအိုရီ ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက်တော့ မမှန်ပါဘူး။ အခြေအနေ အချိန်အခါ ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်တော်သလိုသာ စမ်းကြည့်ကြပါ။
Posted by ZT at 3:57 PM
Labels: ပေါက်တတ်ကရ, အချစ်
မလိုအပ္ေပမယ့္ GK အျဖစ္ ဖတ္သြားပါတယ္။
လူပ်ိဳႀကီးမ်ား လက္ဆြဲ ေဆာ့ဝဲ ေရးေတာ့မယ္ထင္တယ္၊
ခ်စ္ေရးၾကိဳက္ေရး..အိမ္ေရွာင္ေရးအေၾကာင္းေတြ ေရးအုန္းမွပါ၊ လူပ်ိဳၾကီးေတြ theory ေတာ့သိၾကပါရဲ့ လက္ေတြ႔ ကမိန္းမမရတာတခုခုေတာ့...လြဲေနျပီ
ရုပ္တည္ႀကီးနဲ႕ ဂုဏ္ယူၿပီး ရီးဇားတစ္ေယာက္မွ မထားဘူးဖူး ေျပာ ခ်င္လိုက္တာ။
အေနာ္ေတာ့ ကံမေကာင္းရွာဘူး ဒါမ်ိဳးေျပာဖို႕ အခြင့္အေရး လက္လႊတ္လိုက္ရဘီ =P
ေကာ္မန္႔မေရးဘဲ ၾကိတ္ဖတ္မွတ္သားသြားသူေတြ နည္းမယ္မထင္ဘူး :D
ေၾသာ္.... ဆရာေကာင္းေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းသြားၿပီ.... အဟင့္.... ရႊတ္။
ကိုဇက္တီကေရာ အခု တစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုပိုးထားလဲ ဆိုတာ သိခ်င္လိုက္တာ၊
boyz တို႕မ်ားဘာသံမွ မထြက္ဘူး။
ၿကည္႕..ဆင္ဆင္ လဲ ေထာက္ခံတယ္။
က်ေနာ့ညီေလး ဖိုးသၾကၤန္ဖတ္ဖို႕ ယူသြားတယ္ ကိုဇက္တီ :p
အင္း... ကိုယ့္ ကိုလည္းမေရြးဘူး...သူမ်ားကိုၿကိုက္မယ္ ဆိုေတာ. လည္း ... ၾကိဳက္သလိုလို လုပ္ျပန္
တဲ့ ရီးစား လက္ရိွ နဲ့လူပ်ိဳ ၾကီး မ်ိဳး ၾက ေတာ့ ေကာဟင္ ???